MB 2015 martsa - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Martsa
Taona maro lasa izay, rehefa nanontany ny tenako ny fanontaniana hoe handray ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny fomba mahery vaika loatra aho dia nanokatra ny Baiboly aho mba hahita valiny. Rehefa namaky aho dia nahatsikaritra fa tsy nifarana hatrizay io fitsapana io.
Ny mpianatra sy ny mpanara-dia dia faly rehefa fantany fa nohakodiavina ilay vato, dia foana ny fasana ary nitsangana i Jesosy tamin'ny maty. Hadino mora foana izany fa niseho tamin'ny mpanara-dia azy i Jesosy 40 andro taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ary nanome hafaliana lehibe izy ireo.
Ny iray amin'ireo tantaran'ny Paska tiako indrindra dia niseho teny an-dalana ho any Emmaus. Lehilahy roa no tsy maintsy nandehandeha be. Nefa mihoatra ny dia lavitra dia nahakivy azy ireo. Nikorontana ny fony sy ny sainy. Hitanao fa mpanara-dia an'i Kristy izy roa ireo, ary andro vitsy talohan'izay, ilay lehilahy nantsoiny hoe Mpamonjy no nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa nandeha an-tongotra izy ireo dia nisy olon-tsy fantatra tampoka nanatona azy ireo, niara-nandeha tamin'izy ireo teny an-dalana ary niditra tao amin'ilay resaka, nijery izay misy azy ireo. Nampianatra zavatra mahafinaritra izy; nanomboka tamin'ny mpaminany ary nitohy tamin'ny alàlan'ny Soratra Masina rehetra. Nanokatra ny masony izy ny dikan'ny fiainana sy ny fahafatesan'ilay mpampianatra malalany. Nahita azy nalahelo ity olon-tsy fantatra ity ary nitondra azy nanantena rehefa nandeha sy niresaka.
Tonga teo amin'ny toerana nalehany izy ireo. Mazava ho azy fa nangataka ilay olon-kendry olon-kendry mba hiara-misakafo aminy ny lehilahy. Raha vao nitsodrano sy namaky ny mofo ilay vahiny, dia tonga teo amin'izy ireo ary fantatr'izy ireo hoe iza izy - fa rehefa lasa izy dia lasa. Jesosy Kristy Tompony dia niseho taminy tamin'ny nofo ho Ilay nitsangana tamin'ny maty. Tsy nisy nandà izany; Tena nitsangana tokoa izy.
Nandritra ny telo taona nanompoan'i Jesosy dia nanao zavatra nahagaga izy:
Namelona olona 5.000 40 sy mofo sy trondro izy; Nanasitrana ny mandringa sy jamba izy; namoaka demonia sy nanangana ny maty Izy; nandeha teny ambony rano izy ary nanampy ny mpianany iray hanao toy izany koa! Taorian'ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nanao ny asany i Jesosy tamin'ny fomba hafa. Tao anatin'ny andro nialoha ny Fiakarana, nasehon'i Jesosy antsika ny fomba tokony hiainan'ny Fiangonana ny vaovao tsara. Ary inona no tarehin'io? Niara-nisakafo maraina niaraka tamin'ny mpianatra izy, nampianatra sy nanentana an'izay rehetra nifanena taminy. Izy koa dia nanampy ny olona nisalasala. Ary avy eo, talohan'ny niakarany tany an-danitra, Jesosy dia nandidy ny mpianany hanao toy izany koa. Ny ohatr'i Jesoa Kristy dia mampahatsiahy ahy ny zavatra ankasitrahako ny momba ny finoantsika. Tsy te hijanona eo ambadiky ny varavaran'ny fiangonantsika isika, maniry ny hahatongavana any ivelan'ny zavatra noraisinay sy nampiseho fitiavana amin'ny olona.
Isika dia manantitrantitra lehibe ny hahatongavana amin'ny tsara rehetra, ny fahasoavana ary ny fanampiana ny olona izay hahitanay azy. Midika izany fa ny fizarana sakafo fotsiny ho an'ny olona, ​​toy ny nataon'i Jesosy tao Emmaus. Na angamba izany fanampiana izany dia aseho amin'ny fanolorana bisikileta na hanolotra handeha hiantsena ho an'ny be antitra, na mety hanome teny fampaherezana ny namana kivy. Mampahatsiahy antsika i Jesosy fa tamin'ny alàlan'ny fomba tsotra dia nifandray tamin'ny olona izy, tamin'ny lalana mankany Emmaus ary ny maha-zava-dehibe ny fiantrana. Zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fitsanganantsika ara-panahy amin'ny batisa. Ny mino rehetra an'i Kristy, lahy na vavy, dia zavaboary vaovao - zanak'Andriamanitra. Manome antsika fiainam-baovao ny Fanahy Masina - ny fiainan'Andriamanitra ao anatintsika. Amin'ny maha-olom-baovao antsika, dia manova antsika ny Fanahy Masina mba ho tonga bebe kokoa amin'ny fitiavan'i Kristy tanteraka an'Andriamanitra sy ny olona. Raha ao amin'i Kristy ny fiainantsika dia manana anjara amin'ny fiainany isika, na amin'ny fifaliana na amin'ny fitiavana maharitra. Mandray ny fijaliany isika, ny fahafatesany, ny fahamarinany, ny fitsanganany amin'ny maty, ny fiakarany ary ny fanjakany. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika, dia mpandova miaraka amin'i Kristy isika, izay mifanaraka amin'ny fifandraisany tanteraka amin'ny Rainy. Amin'izany dia voatahy amin'ny zavatra rehetra nataon'i Kristy ho antsika isika mba ho tonga zanaka malalan'Andriamanitra, tafaray aminy - miaraka amin'ny voninahitra foana!
Izany no mahatonga ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany (WCG) ho vondrom-piarahamonina manokana. Nanolo-tena ho tanana sy tongotr’i Jesoa Kristy isika amin’ny ambaratonga rehetra ao amin’ny fikambanana misy antsika amin’izay ilana azy indrindra. Te ho tia olon-kafa tahaka ny nitiavan’i Jesoa Kristy antsika isika amin’ny alalan’ny fanatrehana ny kivy, amin’ny fanolorana fanantenana ho an’ireo sahirana ary amin’ny fitondrana ny fitiavan’Andriamanitra ho entina amin’ny zavatra kely sy lehibe. Eo am-pankalazana ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty sy ny fiainantsika vaovao tao aminy, dia aoka tsy hohadinointsika fa mbola miasa i Jesoa Kristy. Mandray anjara amin’io fanompoana io avokoa isika na mandeha amin’ny lalana feno vovoka na mipetraka eo amin’ny latabatra fisakafoana. Feno fankasitrahana aho noho ny fanohananareo sy ny fandraisanareo anjara amin'ny asa fanompoana velona ho an'ny vondrom-piarahamonina eto an-toerana, nasionaly ary maneran-tany.
Andao hankalazantsika ny fitsanganana amin'ny maty